London dị ka di na nwunye | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | London, Ihunanya
Oge a nke afọ bụ oge dị mma iji gaa n’isi obodo Bekee. Obodo ahụ nwere ihu igwe dị mma ma dịka ọ na-eme na obodo ndị nwere isi awọ na ebili mmiri ọtụtụ afọ, mgbe anwụ na-awa ụmụ amaala ya na-apụta ma nwee ọ itsụ ya.
Ntugharị, nri abalị, ịgagharị na ogige ntụrụndụ na ụlọ, ihe ngosi, ememme. London na-enye ọtụtụ ihe n'afọ niile ma ọ bụrụ na ị gaa dị ka di na nwunye ị nwere ike ịga na-eche echiche ma na-ahọpụta ụfọdụ tumadi ihunanya, nke ndị na-ahapụ foto dị ka ndị a na-agaghị echefu echefu dị ka akwụkwọ ozi ịhụnanya. Enweghị usoro ọ bụla site na nke kacha mma na nke kachasị njọ na ndepụta anyị, yabụ lee anya ma wuo nke gị.
1 Onyinye Lido
2 Obere Venice
3 Okporo ụzọ Columbia
4 Ogige Pancras
5 Nyịnya ịnyịnya na Hyde Park
6 Ogige Greenwich
7 Katidral St. Paul
8 Nri oriri na ọ Romanticụ Romanticụ, toasts na teas
Ọ dị na ogige ntụrụndụ na ndị bi ebe ahụ enwewo obi ụtọ ịgba ịnyịnya maka ọ dịkarịa ala otu narị afọ. Ọtụtụ di na nwunye na-abịa ebe a na Satọde, tinye ụkwụ ha na mmiri ma ọ bụ jiri obere ụgbọ mmiri. Ma mgbe oge ruru tii, ha na-aga Lide Café Bar.
Ọ bụ ọdọ mmiri nke na-emepe naanị ná ngwụsị izu site na Mee na ụbọchị asaa n’izu site na June 1 ruo September 12. Lọ oriri na ọeterụeterụ ahụ nwere tebụl n'akụkụ ọdọ mmiri ka ị nwee ike ị drinkụ kọfị, tii ma ọ bụ otu iko mmanya uhie. N’ebe dị nso enwere Swimming Club nke kacha ochie na England yana ebe ndị mmadụ na-egwu mmiri kwa ụbọchị n’agbata elekere isii nke ụtụtụ na 6:9 nke ụtụtụ. Ọbụna n'oge oyi. Ee ee, mmiri dị ọcha maka na a na-anwale ya kwa izu.
Agwọ Lido emeghe site na 10 ruo 6 nke mgbede ọ bụ ezie na ha ga-ahapụ gị ka ọ bata ruo elekere 5:30 nke mgbede. Ọ nwere ọnụahịa nke 4 pound kwa okenye ọ bụ ezie na mgbe elekere anọ nke mgbede gasịrị, ego ụgbọ ahụ na-ada na 4 pound. Mgbazinye nke ụlọ ezumike anyanwụ na-efu £ 4 ụbọchị niile. Arrive rutere na ọkpọkọ na-apụ na ọdụ South Kensington.
Maka ije ije ihunanya na iri nri ehihie na anwụ, ịga ije ga-abụrịrị nke a agbata obi dị jụụ nke ọwa mmiri gbara gburugburu nke ọmarịcha ụgbọ mmiri na-akwagharị. N'akụkụ isi mmiri ahụ enwere ebe a na-ere ihe ọ andụ andụ na ụlọ mmanya na ọtụtụ ụlọ na ụdị ụlọ a na-ewu ewu. E nwere nnukwu ọwa mmiri abụọ, Grand Union na Regent na Paddington's Basin nke na-agbakọta na ọdọ mmiri buru ibu ma mara mma, obi mpaghara ahụ dum, Browing Pond.
Ibi ebe a dị oke ọnụ ma ọ dị jụụ ma ọ bụ nnukwu njem nlegharị anya na maka di na nwunye na ịhụnanya, nnukwu. Ije ahụ nwere ike ịga n'ihu ma hapụ Little Venice n'ụkwụ iji rute Regent's Park na ọmarịcha ọkara elekere.
I nwekwara ike iji ụgbọ mmiri, Waterbus, nke na-agbada ọwa mmiri gaa zoo na Camdem. Nwere ike ịga ebe ahụ site na tube site na ịpụ na ọdụ Warwick Avenue na Bakerloo Line.
Okporo ụzọ Columbia
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnọ na họtel ma ị ga-anọ n'ụlọ ezumike ndị njem, ị ga-enwe ụlọ na mkpofu gị niile. Ppingzụ ahịa maka ịzụ ahịa bụ ọrụ dịịrị gị yana ị nwekwara ike iji uru wee zụrụ onye gị na ya bi. A ezigbo ebe ịzụta ùkwù bụ Columbia Okooko Osisi Ifuru. Naanị Na-amalite na sundays ma ọ dị na East London mana ọ zuru oke ịga ije n'etiti okooko osisi.
Ọzọkwa e nwere ụlọ ahịa ndị mgbe ochie, veranda ndị na-ese ihe na ụfọdụ ụlọ ahịa akwa gburugburu ebe a ka ije wee zuo oke. Dịka ọmụmaatụ, n'okporo ụzọ Ezra, ịnwere ike ịnọdụ ala na cafe mara mma a na-akpọ Lily Vanilly ma detụ kọfị ma ọ bụ tii ụtọ. Nwee ọmarịcha!
Nwere ike ịnọ na-eche ihe bụ ihe ịhụnanya maka ọdụ ụgbọ oloko mana enwere ihe ọ bụla. Ebe a odịbe a mita itoolu dị elu ihe oyiyi na-anọchite anya di na nwunye amakụ jiri obi di uku. O doro anya na ị ga-agafe ọdụ a oge ụfọdụ mgbe ị na-eme ya na nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ wee kwụsị ma Sise ndise.
Ma ebe ọ bụ na ịnọ ọdụ ebe ahụ, ị ​​ga-emecha njem ahụ Searcys St. Pancras Champagne Ogwe. Ogwe ahụ dị mita 98 ​​n'ogologo, ee, ị gụrụ ya n'ụzọ ziri ezi, ha na-ejekwa ozi ma ọ dịkarịa ala Varietiesdị 17 nke mmụọ a na-a drinkụ.
Nyịnya ịnyịnya na Hyde Park
O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ị bụ nnukwu onye na-agba ma ọ bụ na ọ bụghị, ịnwere ike ịgbazite ịnyịnya ma wuo ya ihunanya inyinya inyinya site na otu n'ime London kasị ewu ewu na ogige ntụrụndụ. A na-enye ọrụ a ebe a n'afọ niile, maka ndị na-agba ịnyịnya ndị okenye ma ọ bụ ụmụaka na kwa maka otu.
Ọrụ ahụ na-emepe ụzọ ya na 7: 30 n'ụtụtụ wee mechie na 5 pm, ụbọchị ọ bụla n'izu. Enweghị ahụmịhe gara aga achọrọ n'ihi na inyinya di nwayọ nke-uku. Ọ bụrụ na ịchọrọ echiche ahụ, ịnwere ike ịlele ọnọdụ ihu igwe tupu na mgbe ịmechara ndoputa na ịkwụ ụgwọ na ntanetị ma ọ bụ site na ekwentị. Ọ bụrụ n ’ime ya ogologo oge tupu oge eruo, ị nwere ike ime mgbanwe mgbe niile site n’igwa gị otu izu gara aga. A naghị eweghachi ego ahụ, n'ụzọ ọzọ.
Ọ bụghị ọnụ ala dị ọnụ ala n'ihi na nkuzi ịnya ụgbọ ala na-efu onye okenye 103 pound kwa awa. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ihe ọzọ pụrụ iche, mgbe ahụ ị ga-akwụ 130 pound. Ọnụego ya gụnyere akpụkpọ ụkwụ, okpu na uwe na-enweghị mmiri. Buru n'uche na na ngwụsị izu enwere ọtụtụ mmadụ n'ihi ya, ị ga-ede akwụkwọ ihe karịrị otu izu tupu oge eruo.
Ọ bụ otu n'ime ndị eze ogige ntụrụndụ na mgbe ị gbagoro n’elu ugwu ị nwere ọ wonderfulụ dị ebube na London. N'oge opupu ihe ubi ogige a juputara na okooko osisi, nwere ahihia, okooko osisi ohia, orchid, ma oburu na i nwekwara mmasi n'akụkọ ihe mere eme nke mmiri, o nwere Old Royal Naval College na National Maritime Museum.
Agaghị m agwa gị mgbe obere osisi ya nwere okooko osisi na-acha odo odo na-ama ifuru ma petals na-ada n'okporo ụzọ na n'oche. Ọ bụ ịma mma!
Katidral St. Paul
A ụka bụ mgbe ihunanya ma ọ bụrụ na gị n'uche bụ inwe a "dị nsọ" mmekọrịta. Ma na nke a akpan akpan ụka mara ezigbo mma otú ị nwere ike iji obi gị rịgoro n’elu elu dome ahụ, 259 gafere, ma na-atụgharị uche na London na-eme ka aka gị ...
Katidral dị mfe iru dịka o nwere ọdụ ụgbọ oloko nke ya. Ọ na-emepe na Mọnde ruo Fraịdee site na 8:30 nke ụtụtụ ruo 4:30 elekere na n'ọnụ ụzọ nke dome na-efu pound 18.
Nri oriri na ọ Romanticụ Romanticụ, toasts na teas
Y’oburu n’icho ka gi na nwa nwoke nwoke na nwa agbogho puta igha n’ime ya Nalọ nkwari akụ Connaught. Ogwe ya bụ ebe dị omimi na zoro ezo ị ga-ahụ n'anya. Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị na-ahọrọ eri na panoramic echiche mgbe ahụ Searcy si talọ oriri na ọtaụ atụ na Gherkin bụ ihe kasị mma, na ya iko dome na-egosipụta eluigwe na obodo iferi.
You na-amasị gị echiche nke pint na-ahụkarị british ụlọ mmanya? Onyinye dị ọtụtụ ma na Clerkenwell enwere Fox & Anchor ụlọ mmanya, na nchịkọta nhọrọ ya ma dị mfe, 100% British. N'ikpeazụ, a 5 elekere elekere Can nwere ike ịnụ ụtọ ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke London (n'ime ụlọ nkwari akụ kachasị ma ọ bụ ọbụna na Harrod ka ha na-eje ozi kacha mma).
You na-eche ebe foto dị nke malitere post ahụ? Ebee ka a zoro ugwu Bekee ahụ mara mma? Ọ bụ Richmond Hill, n'ebe ugwu nke Thames meander, gburugburu Richmond Obí na ogige nke otu aha. Enwere ike ịnweta ọhụụ a site na Terrace Walk, nke e mere na narị afọ nke XNUMX.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » London » London dị ka di na nwunye